LALAM-BAOVAO ARA-JAVAKANTO :: Namaky lay ny “E-Show” i Tsanta Randriamihajasoa • AoRaha
LALAM-BAOVAO ARA-JAVAKANTO Namaky lay ny “E-Show” i Tsanta Randriamihajasoa
Hetsika vaovao an’ny Masoivoho amerikanina. Nisantatra ny “E-Show” i Tsanta Randriamihajasoa, izay mpanakanto, mpitendry sy mpihira malagasy voalohany, voafantina sy nandray anjara tamin’ ny Praograma ara-kolontsaina tohanan’ny Departemantam-panjakana Amerikanina na ny “One Beat Program” taona 2018.
Efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana ho an’ny “One Beat Program” taona 2019 ary ny fe-potoana fandefasana ny antontan-taratasy mifanaraka amin’izany dia ny 21 desambra ho avy izao amin’ny alalan’ ny rohy https://apply.1beat.org/ . Ny “Embassy Show” na “E-Show” eny amin’ny ambasady amerikanina kosa dia hotanterahina indray mandeha isam-bolana. Tanjona ny hanamafisana ny fifandraisana sy fifanakalozana ara-kolon- tsaina eo amin’i Etazonia sy Madagasikara sy ho fanomezana sehatra ireo mpanan-talenta malagasy sy amerikanina.
Ny “OneBeat” dia fifanakalozana ara-mozika iraisam-pirenena izay manome lanja manokana ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny mozika sy fifaneraserana ara-piarahamonina amin’ny alalan’ny diplaomasia mitondra hevi-baovao eo amin’ny samy olona. Mpitendry mozika (eo anelanelan’ny 19 ka hatramin’ny 35 taona) avy amin’izao tontolo izao no indray mivondrona any Etazonia mandritra ny efatra herinandro miaraka manoratra, mamokatra ary miaka-tsehatra maneho mozika mitondra vokatra tsara eny amin’ny vondron’ olona ifotony sy manerana izao tontolo izao. Ny vovonana “OneBeat”, izay mampivondrona mpanakanto miisa enina amby sivifolo amby zato avy amin’ny firenena miisa valo amby efapolo, dia tambajotra iraisam-pirenena mampivondrona mpanakanto mpitarika sy mpitondra fiovana eo amin’ny sehatra ara-javakanto, teknôlôjia sy ara-piarahamonina amin’ny mozika.
Ampefiloha Raikitra indray ny « Kozy 25 »
Ivokolo mitety faritra Hoentina mivoaka an’Andavamamba ireo tolotra mampalaza ny AFT
MPANAKANTO ANY IVELANY :: Novidian’ny Karàna mpanefoefo iray amina miliara i Beyonce